काठमाडौं, ५ कार्तिक। कोरोनाको सम्पूर्ण जाँच र उपचार निशुल्क गर्न माग गर्दै भोलि (बिहीबार) माइतिघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन हुने भएको छ। कोरोनाको निशुल्क उपचार गर भन्ने मूल नारा लगाउँदै संयुक्त सांकेतिक विरोध प्रदर्शन गर्न लागिएको हो।
प्रदर्शनलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनको लागि सचेत, संघर्षशील र जिम्मेवार नागरिक एवं राजनैतिक-सामाजिक नेता-कार्यकर्ताहरुलाई झण्डा-ब्यानर प्लेकार्डसहित उपस्थिति हुन आग्रह गरिएको छ। इच्छुक नागरिकलाई बिहीबार दिउँसो १ बजे माइतिघर मण्डलामा उपस्थिति हुन अनुरोध गरिएको छ।
असोज १९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना संक्रमित सबै नागरिकको निःशुल्क उपचार तथा परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेको थियो। कोरोना महामारी भयावह हुन थालेपछि सरकारले उपचार नगर्ने भन्दै जनताको स्वास्थ्यको मौलिक हक खोस्ने निर्णय ग¥यो। सरकारले यसलाई केही दिन गोप्य राखेको थियो।
आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले उक्त कुरा सार्वजनिक गरे। मन्त्रिपरिषदका निर्णय अलग्गै पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्ने गरिएको थियो। असोज १९ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा यो कुरा सरकारले लुकाएको थियो।
मन्त्रालयको कोरोना ब्रिफ्रिङको समयमा डा. गौतमले अब कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार नगर्ने मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको सुनाए। यसलगत्तै सरकारको चौतर्फी आलोचना भयो।
संविधानले मौलिक हकको रुपमा राखेको, सर्वोच्च अदालतले सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क गर्न भनेको र जनस्वास्थ्य ऐन अनुसारको उपचारमा सरकारले हात उठाएको भन्दै सरकारका विरुद्ध नागरिक समाज र सर्वसाधारणले आक्रोश पोखिरहेका छन्।